भारतका विल गेट्स : अजीम प्रेमजी – HamroKatha
भारतका विल गेट्स : अजीम प्रेमजी
आइटि उद्यमी अजीम प्रेमजीकोे कथा !
हाम्रो कथा २०७६ असार २९ गते १५:२१
तस्बिर श्रोत : Fox Business
यो कथा भारतका विल गेट्सको हो । भारतमा पनि विल गेट्स जन्मिए र ? जन्मिए, जो आज विश्वका ७२ औं धनी व्यक्ति छन् । यो कथा एकजना महादानीको पनि हो । यसलाई भारतिय आइटि उद्योगका सुल्तानको कथा भन्दा पनि हुन्छ । अनि यसलाइ आत्मविश्वास, लगनशिलता र दृढताको कथा भन्दा पनि हुन्छ । यो कथा हो भारतका प्रसिद्ध उद्यमी अजीम प्रेमजीकोे ।
प्रेमजीको जन्म २४ जुलाइ सन् १९४५ मा भारतको मुम्बइमा भएको थियो । उनी विप्रो लिमिटेडका चेयरम्यान हुन् । उनको कुल सम्पत्ति १८ दशमलब ३ विलियन अमेरिकि डलर बराबर रहेको छ । उनी भारतका तेस्रो धनि व्यक्ति हुन ।
सन् १९६६ मा २१ वर्षको उमेरमा बुवाको निधन भएपछि उनी स्टयानफोर्ड युनिभर्सिटिबाट इन्जिनियरिङ पढ्दा पढ्दै भारत फर्किन बाध्य भए । र सम्हाले आफ्नो बुवाको सावुन र तेलको व्यापार । तर उनले कम्पनि सम्हाल्दा निकै हण्डर खानुपर्याे ।
शेयर होल्डरहरु भन्थे, ‘यस्तो सानो उमेर र विना अनुभवको व्यक्तिको भरमा कसरी संस्था चल्छ ? कसरी हाम्रो लगानी उठ्छ ?’ । लगानीकर्ताहरु बारम्बार उनलाई सिइओको पद त्याग्न दबाब दिन्थे । तर आत्मविश्वासले भरिएका प्रेमजी भन्थे, ‘म सँग कम्पनी चलाउने अनुभव त छैन होला तर हिम्मत प्रसस्त छ । र तपाइहरुको लगानीलाई म नाफा बनाएर मात्र फिर्ता गर्छु ।’
यसको लागी उनी रातभर पढ्थे । यही पढाईको भरमा एउटा सावुन तेलको व्यापार गर्ने कम्पनीलाई उनले आइटि कम्पनीमा सिफ्ट गरे । र त्यसपछि सुरु गरे विप्रो । यस मार्फत उनी मिनि कम्प्युटर बनाउँछन् । आज भारतको आइटि क्षेत्रमा कोहि कसैले राज गरेका छन् भने त्यो प्रेमजीले नै हो । उनले सिलिकन भ्यालीमा आफ्नो रिसर्च सेन्टर पनि स्थापना गरेका छन् ।
हाल उनको कम्पनीमा करिब २ लाख जना मानिसहरु काम गर्छन् । यत्रो ठूलो कम्पनि र यति धनि मानिसको जीवनशैली पक्कै भव्य हुनुपर्छ भन्ने लाग्दो हो तपाईलाई, तर यस्तो होइन । उनी सादा जीवन जिउन मन पराउँछन् । कहिलेकाहिँ त उनी अटो या सार्वजनिक सवारी चढेरै कार्यलय आवत जावत गर्छन् ।
उनी कमाउँदैनन् मात्र । भनिन्छ उनको कमाइको ५० प्रतिशत रकम उनी दानमा खर्चन्छन् । उनले आफ्नो कमाइबाट ८ विलियन अमेरिकि डलरभन्दा बढि दान गरेका छन् ।
यदि एक जना व्यक्तिको दृढताले उनलाई यत्रो सफल बनाउँछ भने, के हामीले चाँही केही गर्न सक्दैनौ होला र ?